» सत्ता समीकरण : नगदमै सहमतिको तयारी !
सत्ता समीकरण : नगदमै सहमतिको तयारी !
२७ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १९:३९ प्रकाशित
१. रेशम चौधरीको रिहाइ
२. संविधान संसोधन
३. नागरिकता बिधेयक
यि प्रमुख ३ सहितका विविध माग यसपाली नगदमै संवोधन हुँदैछ । त्यो पनि सत्ता टिकाउनको लागि । सत्ता कसको टिक्ने हो ? वा कसको बन्ने हो ? त्यो समयले पक्कै देखाउला । तर, सहमति नगदमै हुँदैछ । यसमा कसैले भ्रम नपालौं । वर्तमान सरकार टिकाउनका लागि संसदको चौंथो ठूलो राजनीतिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी (प्रतिनिधिसभा ३४, राष्ट्रियसभा ३) संग औपचारिक, अनौपचारिक वार्ता संवाद त भइरहेकै छन।
यसबीचमा जसपाका सबै माग पुरा गर्न सरकार तयार भन्ने सूचना र समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन । यस मामिलामा दुबै पक्षका नेताहरुले सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरु पनि दिइरहेकै छन । सरकारमा सामेला हुनें कुरोलाई लिएर जसपाभित्र प्रष्ट दुई धार पनि देखिइसकेको छ।
पार्टी एकीकरण पश्चात पनि जसपाका २ संसदीय दल र संसदीय दलका २ नेता कायमै छन । भलै पार्टी एकता भएको एक बर्ष नै किन नबितोस।
अवस्था यस्तो छ । यदि पार्टी पूर्ववतः अवस्थामा फर्किए भनें तात्कालिन दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी पुनः अस्तित्वमा आउनेंछन एमाले र माओबादी केन्द्र जस्तै ।
अनि संसदमा कुल पाँच दल हुनेंछन । अहिले तिन पार्टी अस्तित्वमा छन । यस्तो भयो भनें प्रतिनिधिसभामा दुबै दलको समान हैसियत कायम हुनेछ । दुबैसंग समान १७ सांसद हुनेंछन । तर राष्ट्रियसभातर्फ भने राजपा १ सिटले अघि हुनेछ । अर्थात राजपासंग २ र समाजवादीसंग १ सदस्य हुनेछन । यस्तोमा पुनः अस्तित्वमा आउने जुनसुकै घटकसंग सहकार्य गर्दा पनि वर्तमान सरकार टिक्छ । यस्तो सुविधा फरक दल र नेतालाई छैन ।
अस्तित्वमा आउन सक्ने दुइ मध्ये एक घटक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब त वर्तमान सरकारमै सामेल भएर राजीनामा गरि निस्केका हुन । उनको बहिर्गमनले पनि एक किसिमको तरङ्ग नै उत्पन्न गराएको थियो । तत् पश्चात नै दुई ठूला मधेश केन्द्रित घटकबिच एकता संभव भएको थियो ।
बिगतलाई फर्केर हेर्दा केपी ओलीको कृपा दृष्टिका कारण राष्ट्रियसभामा राजपाले २ सिट प्राप्त गरेको थियो । त्यो बेला ओलीले राजेन्द्र महतोलाई गुन लगाएका थिए । त्यो गुन यसपटक महतोले तिर्ने चर्चा पनि चलैकै छ । यो संभावना ज्यादा देखिनु स्वाभाविक पनि छ ।
मैले यस लेखको प्रस्थान बिन्दुमा उल्लेख गरेको प्रमुख तीन मागमा पनि समाजवादीको तुलनामा राजपाले अधिक जोडबल गरेको प्रष्ट छ । यसलाई पुष्टि गर्नेगरि उपेन्द्र यादबको सत्तारोहणलाई लिन सकिन्छ । त्यसबेला यादबले उधारोमा सहमति गरेका थिए । जुन पुरा भएन । र यादब आँफ्नो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा सोझै राखेर बाहिरिएका थिए ।
अर्कोतर्फ सोही समय महतो नगदमै सहमतीको चट्टानी अडानमै रहे । त्यो जगजाहेर नै छ । उपेन्द्रसंग पनि सत्ता सहयात्राको संभावना नरहला भन्न सकिन्न । तथापि महतो–ओली सहकार्यको संभावना अधिक छ । समाजवादीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त सार्वजनिक रुपमै ओलीसंगको सहकार्यलाई अस्विकार गरिदएका छन । उपेन्द्रको जोडबल पनि डा. भट्टराईकै मतसंग मिलेको छ ।
जसपा संसदिय दलको एकीकरण पनि नभइसकेको र चुनावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सत्तापक्षबाट आईसकेको कारण जसपा बिभाजनको सम्मुख भन्दा फरक नपर्ला । केही दिन अघि नै तात्कालिन राजपाका शिर्ष नेता महन्थ ठाकुरलाई चुनाबी प्रधानमन्त्री दिन ओली तयार भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भई नै सकेको छ।
जसपा बिभाजनका लागि कुनै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता हालफिलहाल छैन । किनकि उनिहरुको संसदिय दल र दलका नेता फरक–फरक छन । संसदले जसपालाई भन्दा पनि राजपा र समाजवादीलाई मात्रै चिन्छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा सत्तापक्षलाई हुनें देखिन्छ । सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने । हो यहि परिस्थिति हाल देखिँदैछ ।
वर्तमान सत्ता टिक्दै गर्दा हुनें हाताहाती सहमती जनहीतमा हुन्छन वा हुन्नन ? त्यो आम जनताले मूल्याङ्कन गर्नु अति आवश्यक छ । कैलाली हत्याकाण्डमा सर्वोच्चद्वारा दोषी ठहर व्यक्तिलाई सत्ता टिकाउनकै लागि आममाफि दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? अर्को कुरो सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं भारतीयलाई सहजै नागरिकता दिने मनसाय बोकेको भनिएको बिधेयक कार्यान्वयनमा आए के होला ? देशलाई फाइदा होला कि घाटा ? तपाइँहरु आँफै मुल्याङ्कन गर्नुस ।
आज देशका केही ठाउँमा हल्कादेखि सामान्य पानी पर्ने